Amazon Kindle Paperwhite E-reader (32GB) 6-inch – ICT.com.mm
HomeAmazon Kindle Paperwhite E-reader (32GB) 6-inch
Amazon Kindle Paperwhite E-reader (32GB) 6-inch
6″ Touch Display The thinnest, lightest Kindle Paperwhite yet—withaflush-front design and 300 ppi glare-free display that reads like real paper even in bright sunlight. Now waterproof, so you’re free to... [Learn more]
Brand: AmazonSKU: 106219N/ASee more: Amazon, Mobile Phone, New Arrivals, Products, TABLETSFilter by: E-Book Readers,
6″ Touch Display
(3-6) K298,500 each
(7-11) K298,000 each
(12+) K297,500 each
E-reader ရဲ့စာဖတ်ရတာကို နှစ်သက်သူများအကြိုက်တွေ့စေမယ့် Amazon Kindle Paperwhite E-reader လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုတော့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေးနဲ့ ပါးလွှာမှုရှိအောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားကတော့ (6.0) လက်မရှိကာ 300 ppi ရှိတဲ့ Display ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Screen ရဲ့ Lighting condition ကိုမိမိစိတ်ကြိုက် adjust ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စာလုံးတွေရဲ့ Font ဒီဇိုင်းတွေ ကိုလည်း မိမိအလိုရှိသလိုပြောင်းလဲနိုင်ကာ အရွယ်အစားကိုပါ စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေစိုခံတဲ့ E-reader တစ်ခုဖြစ်ပြီး IPX8 ဖြစ်တာကြောင့် ရေအနက် (၂) မီတာမှာ (၆၀) မိနစ်အထိရေစိမ်ခံနိုင်ပါတယ်။ 10th Generation processor ကိုအသုံးပြုပေးထားကာ Internal Memory ကတော့ (32) GB ဖြစ်ပါတယ်။ Connectivity ပိုင်းအတွက် Wifi လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ စာအုပ်ပေါင်းများစွာနဲ့ သတင်းစာပေါင်းများစွာကို ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် Audiobook တွေကိုပါ နားဆင်ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Adjust the text size and boldness and read with Kindle-exclusive fonts, hand tuned to provide maximum readability. Whispersync lets you seamlessly switch between reading and listening on your Kindle and Kindle app without losing your place.